ရန်ကုန် ကွာရန်တင်းစင်တာမှ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ မဲပေးကြသည့်မြင်ကွင်း။ (အောက်တိုဘာ ၂၉၊ ၂၀၂၀)
ကိုဗစ်ဖြစ်နေဆဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရွေးကောက်ပွဲလည်း ကျင်းပတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုဗစ် နောက်ဆုံးအခြေအနေနဲ့ ကာကွယ်ရေးအတွက် ပြင်ဆင်ထားတာတွေကို ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရ ဒေါက်တာသန်းနိုင်စိုးကို ကိုဝင်းမင်းက မေးရာမှာ နောက်ဆုံး ကူးစက်မူအခြေအနေကို သူက အခုလို စတင် သုံးသပ်ပြပါတယ်။
ဒေါက်တာသန်းနိုင်စိုး။ ။ ကိန်းဂဏန်းအရ ကြည့်မယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့က နည်းနည်းပြန်တက်တယ်ပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ အမြင့်ဆုံးတက်ခဲ့တဲ့အနေအထား ၂,၁၀၀ ကျော် တက်ခဲ့တဲ့အနေအထားတော့ ပြန်မရောက်ဘူး။ ပြီးတဲ့အခါကျရင် Test Positivity Rate (စစ်တာစုစုပေါင်းထဲကပိုးတွေ့နှုန်း) နဲ့ ပြန်ကြည့်ရင်တော့ ၉-၈- ၇ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ဆင်းခဲ့ပြီးမှ၊ အခုရက်ပိုင်း ၁၀-၁၁ ပြန်ဖြစ်တာလေးတော့ ရှိတယ်ပေါ့နော်။ ဒါလေးကတော့ ကျနော်တို့ နည်းနည်းစိုးရိမ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ အမြန်ဆုံး ပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်နေတယ်ပေါ့နော်။ ဒါတွေကလည်း တနည်းအားဖြင့် ပြန်တက်လာတာထက်စာရင်၊ တန်းနေတယ် ၊ တည်နေတယ်လို့ ပြောရမှာပေါ့နော်။ အဲဒါတွေကလည်း ဘာဖြစ်လို့ တည်နေရသလဲ၊ ဘာဖြစ်လို့ တန်းနေတာလဲ၊ ဒီအကြောင်းတရားကို နေ့စဉ် နေ့တိုင်းပေါ့နော် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးက တကယ့်ကို ပညာရှင်တွေပေါင်းစုံ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း အဖြေရှာနေတယ်ခင်ဗျ။
ကိုဝင်းမင်း။ ။ ဟုတ်ကဲ့ ဆရာတို့ အခု ဒီသုံးသပ်တဲ့အခါကျတော့ နောက်ဆုံးအခုအချိန်ထိပေါ့နော်၊ ဒီကူးစက်မှု တန့်နေရခြင်းအကြောင်းအရင်းက ဘာကြောင့်လို့ သုံးသပ်ထားမိသလဲ။
ဒေါက်တာသန်းနိုင်စိုး။ ။ အဓိက အစု အစု အစု လေးတွေပေါ့နော်။ Cluster of Cases (လူနာအစုလိုက်) လေးတွေ၊ ကျနော်တို့ သွားတွေ့တယ်။ ဘယ်နေရာမှာ သွားတွေ့သလဲဆိုတော့ ဈေးမှာ သွားတွေ့တယ်။ လိုက်နာမှုတွေ အားနည်းသွားတာတွေ ရှိတာပေါ့နော်။ ဒီဈေးတွေကို အထူးအလေးအနက် ထားပြီးတော့ ပညာပေးတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ၊ ပံ့ပိုးကူညီတဲ့အပိုင်းတွေ၊ တိုးချဲု. ပြီးတော့ ဆောင်ရွက်ဖို့ ရှိပါတယ်ခင်ဗျ။ ဒီရက်ပိုင်းလည်း စပြီးတော့ ဆောင်ရွက်နေပါပြီ။ နောက်တခုက ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတို့၊ ဘိုးဘွားရိပ်သာတို့၊ အဲလိုနေရာမျိုးတွေမှာလည်း Cluster of Cases (လူနာအစုလိုက်) လေးတွေ ပေါ့နော်၊ ခုနပြောသလို အုပ်စုလိုက် အုပ်စုလိုက် ထွက်လာတာပေါ့နော် ။ တယောက်တွေ့တယ်၊ သူနဲ့ Contact Tracing (ထိတွေ့သူတွေကိုခြေရာခံ) လိုက်လိုက်တယ်၊ ၇၀ လောက် ထွက်လာတယ်။ တချို့နေရာတွေဆိုရင် ၂၀၀၊ ၃၀၀ လောက်တောင် ထွက်လာတယ်။ အဲဒီအခါကျတော့ Institution-based (အဖွဲ့အစည်းအခြေပြု) ပေါ့နော်။ ဒါလေးတွေမှာ ကျနော်တို့ အားထည့်ပြီး လိုက်နာရမယ်။ တချို့ကျတော့လည်း စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေမှာ Cases (လူနာ) တွေ၊ Cluster (အစုလိုက်) ဖြစ်တာ ရှိတယ်ပေါ့နော်။ နောက် Community (ရပ်ရွာ) ထဲကလည်း ကြိုကြားကြိုကြား ထွက်တဲ့ဟာပေါနေ့ာ်။ ဒါလေးတွေကိုလည်း ပြည်သူအားလုံးက အတူတကွ ဒီအချိန်လေးမှာ ဖိပြီးတော့ လိုက်နာလိုက်ရင် ကျနော်တို့ ဒါကို ကျော်ဖြတ်နိုင်မှာ ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။
ကိုဝင်းမင်း။ ။ ဟုတ်ကဲ့ နောက်တခုက အစုလိုက်နေရတဲ့ နေရာတွေပေါ့နော် ဆရာခုနပြောတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတို့၊ ဘိုးဘွားရိပ်သာတို့ အဲဒီတွေမှာရော ဆရာတို့ ဘယ်လို အစီအစဉ်နဲ့ လုပ်ဖို့ ပြင်ဆင်ထားတာရှိသလဲ။
ဒေါက်တာသန်းနိုင်စိုး။ ။ တချို့ ဘိုးဘားရိပ်သာတွေမှာဆိုရင် Geriatric Care (သက်ကြီးကျန်းမာရေးစာင့်ရှောက်မူ) လိုမျိုးသွားပြီးတော့၊ တကယ့်ကို ဒီဘက်ကလည်း PPE (အကာအကွယ်ဝတ်စုံ) တွေ ၀တ်ပြီးတော့ ဆရာဝန်တွေ သွားကြည့်ပေးတယ်။ တချို့ ဘိုးဘားရိပ်သာတွေမှာဆိုရင် ၀န်ထမ်းတွေကို စစ်ပေးတာတို့ပေါ့နော်။ အဖိုးအဖွားတွေကို စစ်ပေးတာတို့ ဒါမျိုးကျတော့ ဈေးထက်စာရင် တနိုင်တပိုင်ပေါ့နော် ဒါတွေ ဆောင်ရွက်ပေးတယ်။ တချို့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေ High Risk (အန္တရာယ်မြင့်မြင့်မားမား)ဖြစ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်။ Contact Case (လူနာနဲ့ထိတွေတာ) တွေရှိခဲ့တဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေ၊ ဒါမျိူးတွေကိုလည်း ကျနော်တို့ စစ်ပေးတာတို့ ရှိတယ်ပေါ့နော်။ နောက် စက်ရုံကျတော့လည်း၊ ထိတွေ့မှု ရှိတဲ့နေရာတွေ ဒါတွေလည်း ကျနော်တို့ စစ်တဲ့အပိုင်းတွေတော့ ရှိပါတယ်။
ကိုဝင်းမင်း။ ။ ဟုတ်ကဲ့ အဲဒီတော့ ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ အထူးသဖြင့်တော့ ကိုဗစ်ကူးစက်မှု များနေတဲ့ ဒေသတွေမှာတော့၊ ပိုပြီးတော့ ကာကွယ်ရေးအတွက်ပေ့ါနော် အဓိက ဘာအကြံပေးချင်ပါသလဲ။
ဒေါက်တာသန်းနိုင်စိုး။ ။ အဓိက ကတော့ လက်ရှိ ပါးစပ်၊ နှာခေါင်းက ထွက်တဲ့အမှုန်ပေါ့နော်။ ကူးစက်ပုံက အခုထိလည်း၊ မျက်စိ၊ ပါးစပ်၊ နှာခေါင်းက ဝင်တယ်၊ အဲဒါ နံပတ် (၁)။ နံပတ် (၂) က ထွက်လာတဲ့ အမှုန်တွေက ကပ်ကျန်နေတဲ့အခါ လက်နဲ့ကိုင်မိရင် ပြန်ကူးစက်နိုင်တယ်။ ဥပမာ လက်မဆေးပဲနဲ့ ခုနပြောတဲ့ မျက်စိ၊ ပါးစပ်၊ နှာခေါင်းကို ကိုင်မိရင်ပေါ့နော်။ အဲ့ဒိတော့ နံပတ် (၁) က၊ အဲဒီ ကူးစက်ပုံ (၂) ခုကို၊ Mask (ပါးစပ်နဲ့နှာခေါင်းစည်း) ပေါ့နော်။ Mask ဆိုတာက Surgical Masks (ရိုးရိုးခွဲခန်းသုံး ပါးစပ်နဲ့နှာခေါင်းစည်း) ရဲ့ Grade (အဆင့်အတန်း) က အမျိုးမျိုး ရှိနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့ KN95 Mask တွေပေါ့နော်၊ အဲ့နေ့မှာ အဖြစ်များတဲ့နေရာတွေကို ဦးစားပေးပြီး ထောက်ပံ့ဖို့ စီစဉ်ထားတယ်။ နောက်တခုက ၀င်တာနဲ့ လက်ကို လက်ဖြန်းဆေးရေပေါ့နော်။ ကျွန်တော်တို့ဒီ လက်နဲ့ ညှစ်နေရမှာစိုးလို့၊ တယောက်ပြီးတစ်ယောက်လေ။ အဲ့ဒါ လက်ကို သေချာ ဖြန်းပေးမယ်။ ဖြန်းတဲ့အခါမှာ လက်ချောင်းလေးတွေ ကားပေးထားဖို့လိုတယ်။ ဒါမှ လက်ချောင်းလေးတွေကြားထဲကို ရောက်မယ်။ လက်ဖ၀ါး လက်ခုံပေါ့နော် ၂ ကြိမ်ဖြန်းပေးမယ်။ စိုသွားပြီဆိုရင် အသေအချာပေါ့နော် လက်ဖ၀ါး လက်ဖမိုး လက်ခေါက်ချိုး လက်ဆေးနည်း ၇ ဆင့်ပေ့ါနော၊် ဒါလေးတွေနဲ့ သေချာဆေးလိုက်မယ်။ ခြောက်တဲ့အထိပေါ့နော်၊ စောင့်လိုက်ပြီးတော့၊ စက္ကန့် ၂၀-၃၀ လောက်ဆိုရင် ပြီးပြီပေါ့နော်။ အဲလောက်အတွင်းမှာဆိုရင် သူ့လက်က သန့်သွားပြီပေါ့နော်။ ဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီးရင် မဲပေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အကုန် ဆောင်ရွက်လို့ရတယ်။ ပြီးရင် ထွက်ခါနီးမှာ တခေါက်ထပ်ပြီးရင် လက်ဖြန်းဆေးရည်နဲ့ တခါ ဖြန်းပြီးဆေးပေးမယ်။ ပြီးရင် လက်သန်းမှင်တို့မယ်၊ ပြန်ထွက်မယ်။ အဲ့ဒိတော့ မဲပေးတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တခုလုံးကလည်း မိနစ်ပိုင်းပဲ ကြာမှာဖြစ်တယ်။ WHO ရဲ့ သတ်မှတ်ချက်အရဆိုရင်တော့ ရောဂါပိုးရှိသူနဲ့ ၁၅ မိနစ် ထိတွေ့မှသာလျှင် Primary contact (တိုက်ရိုက်အနီးကပ်ထိတွေ့သူ) လို့ ခေါ်တာပေါ့နော်။ ကျနော်တို့ ဒါတွေအကုန် စမ်းသပ်ပြီးပြီ၊ တချို.ဆို ၆ မိနစ်၊ ၇ မိနစ်ဆိုရင် အကုန်ပြီးသွားပြီ။ နည်းနည်း ကိုယ်စားလှယ်များတဲ့ နေရာတွေပေါ့နော်၊ မဲပုံး ၄ ပုံး ၅ ပုံးလောက် ရှိမယ်ဆိုရင်တော့ ၁၀ မိနစ်လောက် ကြာမယ်၊ အလွန်ဆုံးပေါ့နော်။ အထဲမှာ ၀န်ထမ်းတွေကလည်း လိုအပ်ရင် Face shield တပ်ထားမယ်ပေါ့နော်။ Level2PPE ၀တ်တာတို့ နောက် အဖျား တိုင်းတာတွေလည်း ပါမယ်။ တကယ်လို့ ဖျားတဲ့နာတဲ့လူတွေ မဲပေးချင်ရင် သပ်သပ်လမ်းကြောင်း စီစဉ်ထားမယ်။ အတိုဆုံးလမ်းကြောင်းနဲ့ အမြန်ဆုံးပေးပြီး ပြန်ထွက်နိုင်မယ့်ဟာပေါ့နော်။
ကိုဝင်းမင်း။ ။ ဟုတ်ကဲ့ လက်အိတ်တွေရော သုံးဖို့ ရှိသေးလား ဆရာ။
ဒေါက်တာသန်းနိုင်စိုး။ ။ လက်အိတ်ကတော့ ဆရာရယ် လိုအပ်ရင်တော့ သုံးမယ်လို့ Agree (သဘောတူတာ) လုပ်ထားတာတော့ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် နေရာတိုင်းမှာတော့ မသုံးဘူးပေါ့နော်။ အရင်တုန်းကတော့ စစချင်းတုန်းကတော့ သုံးဖို့လုပ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့က လက်အိတ်ဝတ်နေကျမဟုတ်ဘူး၊ ကျနော်တို့လူမျိုးတွေက။ အဲဒီအခါကျတော့ လက်အိတ်ဝတ်တာနဲ့တင်ပဲ မလိုအပ်တဲ့ ထိတွေ့မှုတွေများမှာလည်း စိုးရိမ်ရတယ်ပေါ့နော်။ ကျနော် ခုနပြောတဲ့ Level2PPE (အဆင့် ၂ အကအကွယ်ဝတ်စုံ) ၀တ်တဲ့လူတွေကတော့ လက်အိပ် ပါမှာပေါ့နော်။ သာမန် မဲလာပေးမယ့်သူတွေအတွက်တော့ မပါဘူးပေါနော် နေရာတော်တော်များများမှာ။
ကိုဝင်းမင်း။ ။ ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာ။
မွနျမာ့ကိုဗဈနောကျဆုံးအခွအေနနေဲ့ ရှေးကောကျပှဲအတှကျ ကွိုတငျပွငျထားမှု
ကိုဗဈဖွဈနဆေဲ မွနျမာနိုငျငံမှာ ရှေးကောကျပှဲလညျး ကငျြးပတော့မှာဖွဈတဲ့အတှကျ ကိုဗဈ နောကျဆုံးအခွအေနနေဲ့ ကာကှယျရေးအတှကျ ပွငျဆငျထားတာတှကေို ကနျြးမာရေးနဲ့အားကစားဝနျကွီးဌာန ပွောခှငျ့ရ ဒေါကျတာသနျးနိုငျစိုးကို ကိုဝငျးမငျးက မေးရာမှာ နောကျဆုံး ကူးစကျမူအခွအေနကေို သူက အခုလို စတငျ သုံးသပျပွပါတယျ။
ဒေါကျတာသနျးနိုငျစိုး။ ။ ကိနျးဂဏနျးအရ ကွညျ့မယျဆိုရငျ ကနြျောတို့က နညျးနညျးပွနျတကျတယျပေါ့နျော။ ဒါပမေယျ့ ကနြျောတို့ အမွငျ့ဆုံးတကျခဲ့တဲ့အနအေထား ၂,၁၀၀ ကြျော တကျခဲ့တဲ့အနအေထားတော့ ပွနျမရောကျဘူး။ ပွီးတဲ့အခါကရြငျ Test Positivity Rate (စဈတာစုစုပေါငျးထဲကပိုးတှနှေု့နျး) နဲ့ ပွနျကွညျ့ရငျတော့ ၉-၈- ၇ ရာခိုငျနှုနျးအထိ ဆငျးခဲ့ပွီးမှ၊ အခုရကျပိုငျး ၁၀-၁၁ ပွနျဖွဈတာလေးတော့ ရှိတယျပေါ့နျော။ ဒါလေးကတော့ ကနြျောတို့ နညျးနညျးစိုးရိမျတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကနြျောတို့ အမွနျဆုံး ပွနျလညျထိနျးခြုပျနိုငျအောငျ ဆောငျရှကျနတေယျပေါ့နျော။ ဒါတှကေလညျး တနညျးအားဖွငျ့ ပွနျတကျလာတာထကျစာရငျ၊ တနျးနတေယျ ၊ တညျနတေယျလို့ ပွောရမှာပေါ့နျော။ အဲဒါတှကေလညျး ဘာဖွဈလို့ တညျနရေသလဲ၊ ဘာဖွဈလို့ တနျးနတောလဲ၊ ဒီအကွောငျးတရားကို နစေ့ဉျ နတေို့ငျးပေါ့နျော ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးက တကယျ့ကို ပညာရှငျတှပေေါငျးစုံ နစေ့ဉျနတေို့ငျး အဖွရှောနတေယျခငျဗြ။
ကိုဝငျးမငျး။ ။ ဟုတျကဲ့ ဆရာတို့ အခု ဒီသုံးသပျတဲ့အခါကတြော့ နောကျဆုံးအခုအခြိနျထိပေါ့နျော၊ ဒီကူးစကျမှု တနျ့နရေခွငျးအကွောငျးအရငျးက ဘာကွောငျ့လို့ သုံးသပျထားမိသလဲ။
ဒေါကျတာသနျးနိုငျစိုး။ ။ အဓိက အစု အစု အစု လေးတှပေေါ့နျော။ Cluster of Cases (လူနာအစုလိုကျ) လေးတှေ၊ ကနြျောတို့ သှားတှတေ့ယျ။ ဘယျနရောမှာ သှားတှသေ့လဲဆိုတော့ ဈေးမှာ သှားတှတေ့ယျ။ လိုကျနာမှုတှေ အားနညျးသှားတာတှေ ရှိတာပေါ့နျော။ ဒီဈေးတှကေို အထူးအလေးအနကျ ထားပွီးတော့ပညာပေးတဲ့ လုပျငနျးတှေ၊ ပံ့ပိုးကူညီတဲ့အပိုငျးတှေ၊ တိုးခြဲု. ပွီးတော့ ဆောငျရှကျဖို့ ရှိပါတယျခငျဗြ။ ဒီရကျပိုငျးလညျး စပွီးတော့ ဆောငျရှကျနပေါပွီ။ နောကျတခုက ဘုနျးတျောကွီးကြောငျးတို့၊ ဘိုးဘှားရိပျသာတို့၊ အဲလိုနရောမြိုးတှမှောလညျး Cluster of Cases (လူနာအစုလိုကျ) လေးတှေ ပေါ့နျော၊ ခုနပွောသလို အုပျစုလိုကျ အုပျစုလိုကျ ထှကျလာတာပေါ့နျော ။ တယောကျတှတေ့ယျ၊ သူနဲ့ Contact Tracing (ထိတှသေူ့တှကေိုခွရောခံ) လိုကျလိုကျတယျ၊ ၇၀ လောကျ ထှကျလာတယျ။ တခြို့နရောတှဆေိုရငျ ၂၀၀၊ ၃၀၀ လောကျတောငျ ထှကျလာတယျ။ အဲဒီအခါကတြော့ Institution-based (အဖှဲ့အစညျးအခွပွေု) ပေါ့နျော။ ဒါလေးတှမှော ကနြျောတို့ အားထညျ့ပွီး လိုကျနာရမယျ။ တခြို့ကတြော့လညျး စကျရုံအလုပျရုံတှမှော Cases (လူနာ) တှေ၊ Cluster (အစုလိုကျ) ဖွဈတာ ရှိတယျပေါ့နျော။ နောကျ Community (ရပျရှာ) ထဲကလညျး ကွိုကွားကွိုကွား ထှကျတဲ့ဟာပေါနေ့ျာ။ ဒါလေးတှကေိုလညျး ပွညျသူအားလုံးက အတူတကှ ဒီအခြိနျလေးမှာ ဖိပွီးတော့ လိုကျနာလိုကျရငျ ကနြျောတို့ ဒါကို ကြျောဖွတျနိုငျမှာ ဖွဈတယျပေါ့နျော။
ကိုဝငျးမငျး။ ။ ဟုတျကဲ့ နောကျတခုက အစုလိုကျနရေတဲ့ နရောတှပေေါ့နျော ဆရာခုနပွောတဲ့ ဘုနျးတျောကွီးကြောငျးတို့၊ ဘိုးဘှားရိပျသာတို့ အဲဒီတှမှောရော ဆရာတို့ ဘယျလို အစီအစဉျနဲ့ လုပျဖို့ ပွငျဆငျထားတာရှိသလဲ။
ဒေါကျတာသနျးနိုငျစိုး။ ။ တခြို့ ဘိုးဘားရိပျသာတှမှောဆိုရငျ Geriatric Care (သကျကွီးကနျြးမာရေးစာငျ့ရှောကျမူ) လိုမြိုးသှားပွီးတော့၊ တကယျ့ကို ဒီဘကျကလညျး PPE (အကာအကှယျဝတျစုံ) တှေ ဝတျပွီးတော့ ဆရာဝနျတှေ သှားကွညျ့ပေးတယျ။ တခြို့ ဘိုးဘားရိပျသာတှမှောဆိုရငျ ဝနျထမျးတှကေို စဈပေးတာတို့ပေါ့နျော။ အဖိုးအဖှားတှကေို စဈပေးတာတို့ ဒါမြိုးကတြော့ ဈေးထကျစာရငျ တနိုငျတပိုငျပေါ့နျော ဒါတှေ ဆောငျရှကျပေးတယျ။ တခြို့ ဘုနျးတျောကွီးကြောငျးတှေ High Risk (အန်တရာယျမွငျ့မွငျ့မားမား)ဖွဈတဲ့ဟာတှပေေါ့နျော။ Contact Case (လူနာနဲ့ထိတှတော) တှရှေိခဲ့တဲ့ ဘုနျးတျောကွီးကြောငျးတှေ၊ ဒါမြိူးတှကေိုလညျး ကနြျောတို့ စဈပေးတာတို့ ရှိတယျပေါ့နျော။ နောကျ စကျရုံကတြော့လညျး၊ ထိတှမှေု့ ရှိတဲ့နရောတှေ ဒါတှလေညျး ကနြျောတို့ စဈတဲ့အပိုငျးတှတေော့ ရှိပါတယျ။
ကိုဝငျးမငျး။ ။ ဟုတျကဲ့ အဲဒီတော့ ရှေးကောကျပှဲမှာတော့ အထူးသဖွငျ့တော့ ကိုဗဈကူးစကျမှု မြားနတေဲ့ ဒသေတှမှောတော့၊ ပိုပွီးတော့ ကာကှယျရေးအတှကျပေ့ါနျော အဓိက ဘာအကွံပေးခငျြပါသလဲ။
ဒေါကျတာသနျးနိုငျစိုး။ ။ အဓိက ကတော့ လကျရှိ ပါးစပျ၊ နှာခေါငျးက ထှကျတဲ့အမှုနျပေါ့နျော။ ကူးစကျပုံက အခုထိလညျး၊ မကျြစိ၊ ပါးစပျ၊ နှာခေါငျးက ဝငျတယျ၊ အဲဒါ နံပတျ (၁)။ နံပတျ (၂) က ထှကျလာတဲ့ အမှုနျတှကေ ကပျကနျြနတေဲ့အခါ လကျနဲ့ကိုငျမိရငျ ပွနျကူးစကျနိုငျတယျ။ ဥပမာ လကျမဆေးပဲနဲ့ ခုနပွောတဲ့ မကျြစိ၊ ပါးစပျ၊ နှာခေါငျးကို ကိုငျမိရငျပေါ့နျော။ အဲ့ဒိတော့ နံပတျ (၁) က၊ အဲဒီ ကူးစကျပုံ (၂) ခုကို၊ Mask (ပါးစပျနဲ့နှာခေါငျးစညျး) ပေါ့နျော။ Mask ဆိုတာက Surgical Masks (ရိုးရိုးခှဲခနျးသုံး ပါးစပျနဲ့နှာခေါငျးစညျး) ရဲ့ Grade (အဆငျ့အတနျး) က အမြိုးမြိုး ရှိနိုငျတယျ။ ဒါကွောငျ့မို့ KN95 Mask တှပေေါ့နျော၊ အဲ့နမှေ့ာ အဖွဈမြားတဲ့နရောတှကေို ဦးစားပေးပွီး ထောကျပံ့ဖို့ စီစဉျထားတယျ။ နောကျတခုက ဝငျတာနဲ့ လကျကို လကျဖွနျးဆေးရပေေါ့နျော။ ကြှနျတျောတို့ဒီ လကျနဲ့ ညှဈနရေမှာစိုးလို့၊ တယောကျပွီးတဈယောကျလေ။ အဲ့ဒါ လကျကို သခြော ဖွနျးပေးမယျ။ ဖွနျးတဲ့အခါမှာ လကျခြောငျးလေးတှေ ကားပေးထားဖို့လိုတယျ။ ဒါမှ လကျခြောငျးလေးတှကွေားထဲကို ရောကျမယျ။ လကျဖဝါး လကျခုံပေါ့နျော ၂ ကွိမျဖွနျးပေးမယျ။ စိုသှားပွီဆိုရငျ အသအေခြာပေါ့နျော လကျဖဝါး လကျဖမိုး လကျခေါကျခြိုး လကျဆေးနညျး ၇ ဆငျ့ပေ့ါနော၊ျ ဒါလေးတှနေဲ့ သခြောဆေးလိုကျမယျ။ ခွောကျတဲ့အထိပေါ့နျော၊ စောငျ့လိုကျပွီးတော့၊ စက်ကနျ့ ၂၀-၃၀ လောကျဆိုရငျ ပွီးပွီပေါ့နျော။ အဲလောကျအတှငျးမှာဆိုရငျ သူ့လကျက သနျ့သှားပွီပေါ့နျော။ ဒါနဲ့ ပတျသကျပွီးရငျ မဲပေးတဲ့လုပျငနျးစဉျအကုနျ ဆောငျရှကျလို့ရတယျ။ ပွီးရငျ ထှကျခါနီးမှာ တခေါကျထပျပွီးရငျ လကျဖွနျးဆေးရညျနဲ့ တခါ ဖွနျးပွီးဆေးပေးမယျ။ ပွီးရငျ လကျသနျးမှငျတို့မယျ၊ ပွနျထှကျမယျ။ အဲ့ဒိတော့ မဲပေးတဲ့ လုပျငနျးစဉျတခုလုံးကလညျး မိနဈပိုငျးပဲ ကွာမှာဖွဈတယျ။ WHO ရဲ့ သတျမှတျခကျြအရဆိုရငျတော့ ရောဂါပိုးရှိသူနဲ့ ၁၅ မိနဈ ထိတှမှေ့သာလြှငျ Primary contact (တိုကျရိုကျအနီးကပျထိတှသေူ့) လို့ ချေါတာပေါ့နျော။ ကနြျောတို့ ဒါတှအေကုနျ စမျးသပျပွီးပွီ၊ တခြို.ဆို ၆ မိနဈ၊ ၇ မိနဈဆိုရငျ အကုနျပွီးသှားပွီ။ နညျးနညျး ကိုယျစားလှယျမြားတဲ့ နရောတှပေေါ့နျော၊ မဲပုံး ၄ ပုံး ၅ ပုံးလောကျ ရှိမယျဆိုရငျတော့ ၁၀ မိနဈလောကျ ကွာမယျ၊ အလှနျဆုံးပေါ့နျော။ အထဲမှာ ဝနျထမျးတှကေလညျး လိုအပျရငျ Face shield တပျထားမယျပေါ့နျော။ Level2PPE ဝတျတာတို့ နောကျ အဖြား တိုငျးတာတှလေညျး ပါမယျ။ တကယျလို့ ဖြားတဲ့နာတဲ့လူတှေ မဲပေးခငျြရငျ သပျသပျလမျးကွောငျး စီစဉျထားမယျ။ အတိုဆုံးလမျးကွောငျးနဲ့ အမွနျဆုံးပေးပွီး ပွနျထှကျနိုငျမယျ့ဟာပေါ့နျော။
ကိုဝငျးမငျး။ ။ ဟုတျကဲ့ လကျအိတျတှရေော သုံးဖို့ ရှိသေးလား ဆရာ။
ဒေါကျတာသနျးနိုငျစိုး။ ။ လကျအိတျကတော့ ဆရာရယျ လိုအပျရငျတော့ သုံးမယျလို့ Agree (သဘောတူတာ) လုပျထားတာတော့ရှိတယျ။ ဒါပမေယျ့ နရောတိုငျးမှာတော့ မသုံးဘူးပေါ့နျော။ အရငျတုနျးကတော့ စစခငျြးတုနျးကတော့ သုံးဖို့လုပျခဲ့တယျ။ ဒါပမေယျ့ ကနြျောတို့က လကျအိတျဝတျနကေမြဟုတျဘူး၊ ကနြျောတို့လူမြိုးတှကေ။ အဲဒီအခါကတြော့ လကျအိတျဝတျတာနဲ့တငျပဲ မလိုအပျတဲ့ ထိတှမှေု့တှမြေားမှာလညျး စိုးရိမျရတယျပေါ့နျော။ ကနြျော ခုနပွောတဲ့ Level2PPE (အဆငျ့ ၂ အကအကှယျဝတျစုံ) ဝတျတဲ့လူတှကေတော့ လကျအိပျ ပါမှာပေါ့နျော။ သာမနျ မဲလာပေးမယျ့သူတှအေတှကျတော့ မပါဘူးပေါနျော နရောတျောတျောမြားမြားမှာ။
ကိုဝငျးမငျး။ ။ ဟုတျကဲ့ ကြေးဇူးအမြားကွီးတငျပါတယျဆရာ။